"I studio encinci yegrafik" - I-Airbnb
"I studio encinci yegrafik"
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguCorinne
Ngaba ungathanda ikhefu eliyedwa entliziyweni ka-Annecy?
Esi situdiyo sincinci sihlaziywe ngokupheleleyo kwaye sifakwe ngononophelo, sinebalcony enkulu, ekuvumela ukuba ube nesidlo sasemini kwaye uphumle kwindawo evulekileyo.
Siqulathe lokuhlambela kunye ikhabhathi imvula enkulu, isitya USB, izindlu zangasese (sanibroyeur) ezahlulwe sisithuba eliyasuyasu, nekhitshi yaxhobisa, induction Isitovu, ifriji, microwave, umatshini ikofu, okudlela indawo, indawo ngubo, ebhedini yokugcina.
Ifakwe kwisakhiwo esikhuselekileyo esine lift ukusuka ngo-1929, malunga nesikhululo sikaloliwe, esi situdiyo sincinci se-boutique sicocekile, sihlaziyekile kwaye sihombise ubuhle sivula i-terrace enkulu yangaphandle eya kukuvumela ukuba ube nesidlo sasemini kwaye uphumle emoyeni.
Emasangweni edolophu endala, kwimizuzu eli-10 ukusuka Lake kunye iziko Bonlieu (iziko zenkcubeko iholo yokusebenza), imizuzu-5 ukusuka Courier kwiziko lokuthenga (evenkileni kunye bhanyabhanya), indawo yayo Luhle lokuhlola isixeko unyawo .
Iindawo ezininzi zokupaka iimoto ezigqunyiweyo (ezihlawulayo) ezikufutshane, kodwa ungamisa isithuthi sakho ngaphandle (simahla)
Unako kwakhona ukuqesha ibhayisekile (kunokwenzeka ibhayisekile yombane ejikeleze ichibi) kunye neendawo zokupaka ezikhuselekileyo.
Imigca yebhasi eyahlukeneyo iya kukuvumela ukuba undwendwele indawo engqonge umbindi wesixeko, kwaye uye lula ukuya eGeneva, eChamonix, kunye nezinye iindawo zokuchithela i-ski.
Zininzi iibhari kunye neeresityu ezikufutshane, kodwa indawo yokuhlala ezolileyo njengoko ikwicala lentendelezo.
Indawo yakho yokuhlala isentliziyweni ka-Annecy! kumasango edolophu endala kunye nemarike eqhelekileyo ngeCawa kusasa!
phantse ngokuchasene nesikhululo, kulula kakhulu ukufikelela kwaye ikunika zonke izinto eziluncedo kumbindi wesixeko!
Ndiza kukuxelela ezona dilesi zibalaseleyo zama-pastries, izinto ezikhethekileyo zalapha ekhaya, iimpahla, umhombiso ...
Hayi indlela ekukuhle ngayo ukuhamba kudederhu lweendledlana zika-Annecy wakudala, unyuke uye kwi-chateau uze ubuyele echibini!
Kodwa i-Annecy ikwaliziko layo lenkcubeko, iithiyetha zayo ezincinci kunye nemiboniso bhanyabhanya yayo ...
Ngaphandle kokulibala uMnyhadala wayo weFilimu weHlabathi, imiboniso yayo emininzi ...
Ndihlala kwisakhiwo esifanayo nestudiyo, ndiyakuthanda ukusingathwa kunye nokunceda abantu bafumane u-Annecy! Ndiza kukunika eyona ndawo yam yokutyela, iikhefi kunye needilesi zokuthenga! Kwaye kunye neelwandle ezintle ezijikeleze ichibi ...
Ndihlala kwisakhiwo esifanayo nestudiyo, ndiyakuthanda ukusingathwa kunye nokunceda abantu bafumane u-Annecy! Ndiza kukunika eyona ndawo yam yokutyela, iikhefi kunye needilesi zoku…
Inombolo yomthetho: 7401000192825